Skirt Fekitori | Wholesale Skirt Vagadziri, Vatengesi
Fashoni Yekupfeka Vakadzi Yakashongedzwa Yakareba Sketti YeShizha Chitubu
Iyi inozivikanwa bohemian chiffon siketi inogadzirwa neyakagadzikana tulle zvinhu, inova yeganda-inoshamwaridzika uye isina kusimba, ichikuunzira nyaradzo zuva rese. Iyo jira remhando yepamusoro rinoita kuti siketi yese ive yakanaka asi yakajeka. Iyo inobhururuka nehurefu hwamakumbo, uye iyo hem iri hombe, inoratidza inoyevedza uye retro hunhu. Masiketi akareba akakwenenzverwa anowedzera echikadzi kana apfekwa.
SK870005 2021 Kupisa Kutengesa Multicolor Elegant Casual Vasikana 'Solid Satin Mini Masiketi Yezhizha
Iyi tsvarakadenga yepamusoro-chiuno mini siketi ine dhizaini dhizaini, resi trim uye kuvhara. Inonyaradza uye yakajeka kupfeka, satin machira, ane ganda-ane hushamwari uye akaomesesa, akawanda-mavara sarudzo. Pfeka masiketi edu madiki anoshamisira kukuita kuti umire kunze kwevanhu.
Chimiro: chisina kujairika
Kureba: pamusoro pebvi
Type: pleated siketi
SK870001 Vatsva Vanosvika 2021 Vakadzi Vintage Violet Yakakwira Chiuno A-Mutsetse Wakakurumbira Satin Sketi YeChirimo Zhizha.
Iyo nyowani fashoni satin siketi muzhizha, yakashongedzwa dhizaini uye isina kujairika hem, isina kusimbwa dhizaini, isingaonekwe zipi kuvhara padivi, yakapfava, yakajeka uye yakasununguka kupfeka. Iyo yakakosha satin slip chipfeko, kungave kurodha kana kurodha pasi, inogona kufungidzirwa chero chitarisiko chinowedzera kumwe kupenya uye kwakanatswa pfungwa. Mufashoni satin machira uye retro violet kara, inokudzwa uye inoyevedza inosimbisa hunhu hwako.
- Midi kureba
- Kukwira kwakakwirira
- Iyo A-mutsara silhouette
SK870002 2021 Vakadzi Fashoni Multicolor Sexy Yakakwira Chiuno Elastic Pleated Mini Skirts
Iyo yakasarudzika pleated siketi yakakodzera kwazvo kupfeka kwemazuva ese, kutamba-basa, yunifomu uye kazhinji nguva. Inogadzikana uye yakajeka, yakashongedzwa uye yakanaka. Chiuno chakasununguka, zviri nyore kuisa uye kubvisa, akawanda-mavara sarudzo, wedzera akasiyana mavara kune inopisa zhizha. Yakagadzirwa ne100% polyester fiber, inguva yekutarisira iri nyore.
SK870001 2021 Kupisa Kutengesa Multicolor Elegant Satin Solid Yakareba Sketi Yemuchirimo Zhizha
Mhedziso Yekukurumidza Tsananguro Zera Boka: Vakuru Gender: Vakadzi Mapatani Rudzi: Solid Waistline: Natural madhirezi Kureba: Midi Chimiro: Chaicho Kushongedza: Hapana mazuva manomwe sampuro yekuraira inotungamira nguva: ...
SK870003 2021 Kupisa Kutengesa Vakadzi Vasikana Jeans Casual Rima Bhuruu CF Kutsemura Vakadzi Midi Yakareba Denim Skirt